Dagaalkii Lixda Xiddig Ee Kooxaha Barcelona Iyo Real Madrid Oo Bilawday. - Wargane News
Home Sports Dagaalkii Lixda Xiddig Ee Kooxaha Barcelona Iyo Real Madrid Oo Bilawday.
Xili ciyaareedyadii ugu danbeeyay waxaa si joogto ah laysku barbar dhigayay wax kasta oo ay garoonka ka sameeyaan lixda gool dhaliye ee ka tirsan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ee MSN iyo BBC oo laga soo gaabiyay Lionel Messi, Luis Suarez & Neymar JR iyo Cristiano Roanaldo, Karim Benzema iyo Gareth Bale. Labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay marka ay noqoto goold halinta waxaa aduunka ka yaabsaday MSN oo BBC iyo cid walba banaan ugaga tagay.
Laakiin markale dagaalku wuu bilawday iyada oo xili ciyaareedka cusub ee 2016/17 ay markale qaab duufaan ah ay ku bilawdeen xidigaha koonfur America Messi, Suarez iyo Neymar iyaga oo haddaba si wayn isku muujiyay waxayna aad uga fogaadeen gool dhalinta BBC oo dhibaato dhaawacyo ahi ay haysato. Inkasta oo ay wax dabiici ah tahay in ciyaartoyda uu soo gaadho dhawac haddana marka lays barbar dhigayo BBC iyo MSN saamayn kuma laha dhaawaca iyo cudur daarku waxaana la soo qaataa haddaba sida ay u kala gool dhalin badan yihiin.
Tusaale ahaan xili ciyaareedkii hore waxaa dhibaato dhaawac ay ragaadisay Gareth Bale halka Lionel Messu uu laba bilood garoomada dhaawac kaga maqnaa laakiin haddana waxaa markasta socotay is barbar dhiga BBC Iyo MSN waxaana haddaba lala socoday qaabka ay u kala sareeyaan. Waxaana markale Madrid iyo Barcelona ay hogaamin doona xidigaha lixda ah ee aduunka ugu fiican.
Xili ciyaareedkan Messi, Suarez iyo Neymar ayaa haddaba dhaliyay 17 gool inkasta oo kulamo aad u kooban la ciyaaray waxaana inta ugu badan goolashan dhaliyay Lionel Messi iyo Luis Suarez oo ku bilawday qaab ciyaareed aan la rumaysan karin. Messi oo kaliya ayaaba dhaliyay 8 gool, waana tiro saddex gool ka badan inta ay dhaliyeen Ronaldo, Benzema iyo Bale. Suarez ayaa isna dhaliyay 7 gool halka Neymar oo Brazil ka soo laabtay dhawaan uu dhaliyay 2 gool oo kaliya.
Taas badalkeeda BBC ayaa ilaa hadda dhaliyay 5 gool oo kaliya iyada oo Ronaldo uu laba gool dhaliyay, Benzema ayaa hal mar shabaqa soo taabtay waxaana sidoo kale laba gool dhaliyay Gareth Bale oo inta ugu badan u saftay Madrid mararka la barbar dhigo Benzema iyo Ronaldo inkasta oo uu seegay kulankii Espanyol.Bale oo uu dhawac soo gaadhay kulankii Sporting ayaa taam u noqon waayay kulankii Espanyol.
Neymar JR ayaa isna qayb ka ahaa xulka qaranka Brazil ee qaybta ka ahaa ciyaarihii Olympics wuxuuna sidoo kale ku sii nagaaday Brazil si uu u ciyaaro kulamadii caalamiga ahaa taas oo keentay in xili danbe soo laabtay halka Messi uu dhawaac ku soo gaadhay kulankii Argentina iyo Uruguay. MSN ayaa labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay soo dhigay rekoodh ay adag tahay in si sahlan lagu gaadho waxayna soo dhaliyeen 122 gool oo xili ciyaareedkii 2014/15 ahaa iyo 131 gool oo xili ciyaareedkii 2015/16 ay dhaliyeen.
Bartilmaameedka xiga ee MSN ayaa ah kulanka adag ee Atletico Madrid kaas oo Camp Nou ka dhici doona halka BBC ay dagaal ugu jiraan in ay taam u noqdaan kulanka ay Los Blancos booqan doonto kooxda Villarreal ee arbacada. Sabab kasta oo jirta haddana natiijada ayaa ah MSN 17 – BBC 5. Laakiin wali xili ciyaareedku waa bilaw waxaana ilaa dhamaadka xili ciyaareedka sii socon doona dagaalka xidigahan u dhexeeya.
Haddaba akhriste miyaad filaysaa in BBC ay soo gaadhi karaan gool dhalinta MSN oo xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah si wayn ugaga horeeya gool dhalinta?. MSN markale ma awoodi doonaan in ay jabiyaan rekoodhkii xili ciyaareedkii hore ay dhigeen ee ahaa in ay dhaliyeen 131 gool?.